China OTR Rim components China OEM na-emepụta 25 factory ihe nrụpụta ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Hygg
Kedu ihe mejupụtara rim?
Rim mmiri mkpọchi mkpọchi, mgbanaka akụkụ, oche bead, igodo ọkwọ ụgbọala na flange n'akụkụ maka ụdị rim dị iche iche dịka 3-PC, 5-PC & 7-PC OTR rim, 2-PC, 3-PC & 4-PC forklift rims. Ihe rim akụrụngwa nwere nnukwu kụrụ nke nha, ọ na-amalite site nha 8 "ruo 63". Rim mmiri dị oke mkpa maka ogo na ikike. Mkpọchi mkpọchi kwesịrị ịnwe ezi mgbanwe iji jide n'aka na ọ na-akpọchi ogwe ahụ n'ime ugbu a ọ dị mfe ịrịgo na demount. The bead oche bụ oké egwu maka ikike nke rim, ọ na-agba isi ibu nke rim. Akụkụ mgbanaka bụ akụrụngwa jikọọ na taya, ọ kwesịrị ịdị ike ma zuo oke iji kpuchie taya ahụ.
Olee otú ọtụtụ ndị dị rim mmiri?
E nwere ụdị dị iche iche rim akụrụngwa, na ngwa dị iche iche anyị nwere ọkọlọtọ nhazi rim akụrụngwana ihe dị arọ rim components. Kọwaa site imewe,rim akụrụngwa nwere ike nkewa dị ka n'okpuru.
Ngwunye akụrụngwa rim components
- T-usoro, EM usoro.
Mining rim mmiri
- EM / EV usoro
Forklift rim mmiri
- Mkpọchi mkpọchi, mgbanaka akụkụ, oche bead maka 3-PC na 4-PC forklift rim.
Gịnị bụ rim components eji?
Nke anyi rim njikọta enwere ike iji ya rụọ ọtụtụ n'ime OTR rim dịka:
(1) Ihe owuwu ihe owuwu
(2) Forklift rim
(3) Ngwurugwu Mining
Ihe Nlereanya Ndị Anyị Na-enye
Rim components aha Nha
Mkpọchi mgbanaka 25 "
AKWIVKWỌ AKWIVKWỌ ụgbọ mmiri Nha niile
Akụkụ Flange 25 ", 1.5"
Akụkụ Akụkụ 25 ", 2.0"
Oche Bead 25 ", 2.0", Obere ọkwọ ụgbọ ala
25 ", 2.0" Nnukwu ọkwọ ụgbọ ala
25 "x 4.00" (Edere)
Anyị uru nke rim mmiri?
Na mbu dika onye na emeputa ihe nchara, HYWG malitere imeputa rim akụrụngwa kamgbe ngwụcha afọ 1990, na 2010 HYWG ghọrọ onye ndu ahịa na gwongworo rim akụrụngwa na OTR rim akụrụngwa, ahịa na-eru 70% na 90% na China; ndị OTRrim akụrụngwa buuru ndi na-emeputa ihe ndi uwa dika Titan na GKN. Taa HYWG bụ naanịrim akụrụngwa onye nrụpụta nwere ike imepụta gwongworo, OTR na forklift rim akụrụngwa, anyị bụ ndị ndu ụwa niile na rim akụrụngwa ahịa.
Nke gara aga: Industrial rim maka Ọganihu inwego Tele handler China emeputa
Industrial rim maka Ọganihu inwego Tele handler China ...
OTR Rim mmiri dị iche iche site na 8 ″ ...
Ewu ngwá OTR rim maka Grader China ...